Manafatra fiara avy any Canada mankany UK | Ny fanafarana ny fiarako
Fanafarana ny fiaran'ny Kanada anao any Angletera?
Manam-pahaizana momba ny indostria izahay rehefa manafatra fiara mankany UK, ka tsy manandrana irery an'ity dingana ity izahay, fa tena mamporisika ny hampiasana ny serivisinay mba hanamora ny fiainana anao.
Fitaterana ny fiaranao avy any Canada mankany amin'ny Fanjakana Mitambatra
Ny fandefasana entana avy any Canada dia mitranga avy any Vancouver na Toronto, ary mandrindra ny dingana rehetra izahay manomboka amin'ny fanangonana, ny kamiao, ny fandefasana, ny fadin-tseranana, ny fitsapana ary ny fisoratana anarana. Makà Quote avy aminay ho an'ny teny namboarina namboarina sy ekena hampidirana ny fiaranao avy any Canada mankany UK.
Famoahana fiara fitaterana an-tanety
Manana masoivoho lehibe any Canada izahay izay manampy amin'ny fanondranana sy fandefasana ny fiaranao mankany UK, handamina ny fanangonana ny fiaranao avy amin'ny adiresinao na ny adiresin'ilay olona nividiananao azy raha ilaina izany.
Manolotra serivisy fitaterana mihidy na misokatra izahay mba hahafeno ny fepetra sy teti-bola rehetra. Avy eo dia halefantsika any amin'ny seranana akaiky indrindra ny fiara.
Fametrahana sy fandefasana fiara
Aorian'ny fahatongavan'ny fiaranao ao amin'ny fitoeram-bokinay, dia hapetrakay ao anaty fitoeram-pandefasana azy io miaraka am-pitandremana fatratra. Ireo masoivohonay eto an-tany any Canada dia nantsoina noho ny traikefany sy ny sainy amin'ny antsipirihany rehefa manome fiara amin'ny antsipirihany izy. Hataon'izy ireo antoka fa voafatotra ao anaty kaontenera vonona ny hitaterana any UK ny fiaranao.
Manome fiantohana an-dranomasina izahay izay mandrakotra ny fiaranao hatramin'ny sanda fanolo manontolo mandritra ny fitaterana.
Ohatrinona no haba aloanao handefasana ny fiaranao?
Rehefa manafatra fiara avy any Canada mankany UK ianao dia afaka manao izany maimaimpoana tanteraka raha toa ka manana fiara mandritra ny enim-bolana farafaharatsiny ary niaina ivelan'ny EU nandritra ny 12 volana.
Raha tsy mihatra ireo mason-tsivana ireo, ny fiara natsangana tao amin'ny EU dia iharan'ny haba 50 £ sy 20% VAT, mifototra amin'ny vola naloanao ho an'ny fiara, miaraka amin'ireo naorina ivelan'ny UE izay miditra amin'ny haba 10% sy 20% VAT.
Ny ankamaroan'ny fiara mihoatra ny 30 taona dia hahazo ny VAT import 5% ary tsy misy adidy rehefa ampidirina, raha toa ka tsy novaina tamin'ny fomba nampiasainy izy ireo ary tsy natao ho mpamily isan'andro.
Fanovana fiara sy fankatoavana karazana
Rehefa tonga any Angletera ianao dia iharan'ny fitsapana sy fanovana maro ny fiaranao mba hahazoana antoka fa hahatratra ny fenitry ny làlambe UK.
Ny fanovana dia ahitana indrindra ny fanitsiana ireo jiro famantarana amin'ny fiara. Ny fiara mpamokatra amerikanina sy kanadiana dia mazàna manana tondro miloko isan-karazany, izay matetika ampidirina ao anaty takamoa. Izy ireo koa dia manana jiro amin'ny lafiny maro loko ary tsy misy mari-pamantarana na jiro zavona matetika.
Hamboarinay ho an'ny fenitra UK ny fiaranao amin'ny alàlan'ny haitao farany hazavana LED ao an-trano farany farany, ahafahanay mameno ny fanovana ilaina rehetra ary mitazona ny fomban'ny fiaranao.
Ireo fiara nafarana avy any Canada izay latsaky ny folo taona dia mila manao fanadinana IVA alohan'ny haneken'ny DVLA ny fisoratana anarana. Satria orinasa tokana any Angletera manana làlam-panadinana IVA miasa manokana, ho an'ny fiaran'ny mpandeha, izay neken'ny DVSA sy ny ISO voamarina, ny fotoana ilana hamaranana an'io endri-panafarana io dia haingana kokoa noho ny mampiasa mpanafatra fiara hafa ho toy ny fiarao. tsy mila miala amin'ny tranokalanay velively ary mifehy ny fandaharam-pitsapana izahay.
Ny fitsapana IVA dia tsy ilaina amin'ny fiara mihoatra ny folo taona, na izany aza dia mila mandalo MOT ka tsy maintsy mendrika ny lalana amin'ny resaka jiro famantarana, akanjo kodiarana, fampiatoana ary frein, izay hojerentsika mazava ho azy mety entina amin'ny làlambe UK.
Raha mihoatra ny 40 taona ny fiara dia tsy andoavam-bola i MOT ary afaka aterina mivantana any amin'ny adiresinao any Angletera ary hisoratra anarana lavitra.
Ny fanontaniana mety anananao momba ny fanafarana ny fiaranao avy any Canada mankany amin'ny Fanjakana Mitambatra
Afaka manampy amin'ny fizotran'ny fanondranana ny fiaranao avy any Canada ve izahay?
Ireo masoivohon'ny fandefasana anay dia hampianatra anao ny zavatra tokony hatao rehefa mandroso amin'ny teny nindraminao ianao. Ny fizotran'ny fanondranana dia miovaova arakaraka ny firenena fa ny valiny fohy dia eny, afaka manampy izahay.
Ny fizotry ny fanondranana dia somary tsotra fotsiny any amin'ny ankamaroan'ny firenena fa toa mety hafangaro amin'ny fahitana azy voalohany.
Azonao angonina ve ny fiarako?
Hanangona ny fiaranao avy amin'ny toerana rehetra any Kanada izahay ary avy eo hitondra azy any amin'ny seranana ho anao. Izy io dia hiantohana mandritra ny fizotrany ary indray mandeha amin'ny sambo dia voasaron'ny fiantohana an-dranomasina izy io.
Any Angletera, azontsika atao ihany koa ny mamindra ny fiara amin'ny alàlan'ny tamba-jotra mpitatitra fiara matoky.
Ohatrinona ny mandefa fiara avy any Canada?
Miankina amin'ny vanim-potoanan'ny taona sy ny toetran'ny tsena ankehitriny izany. Hiezaka hatrany izahay hanome anao ny vidiny tsara indrindra amin'ny fandefasana ny fiaranao mankany United Kingdom.
Amin'ny ankapobeny, izy io dia mihoatra ny fandefasana azy, ny morontsiraka atsinanana noho ny halavirana lavitra.
Mandra-pahoviana no halefa avy any Canada?
Miankina amin'ny toerana misy ny fiara izany. Ny fandefasana avy any Canada avy any amin'ny morontsiraka andrefana dia mitaky fotoana lava kokoa noho ny fizoran'ny tsipika fandefasana. Mamakivaky ny lakandranon'i Panama izy io matetika izay midika fa tsy maintsy midina ny morontsiraka andrefan'i Amerika manontolo.
Raha akaiky kokoa ny fiara milaza hoe, New York, dia mety ho roa herinandro. Ny seranana alefa aminy dia manapa-kevitra ny halavan'ny fotoana hijanonan'ny sambo amin'ny ranomasina.
Azonao ovaina ve ny fiara kanadianina misy famantarana amber sns?
Satria ny ankamaroan'ny fiara avy any Canada hiditra amin'ny fiara amerikana dia mety hanana zavatra mahazatra toy ny famantarana mena.
Manolotra serivisy iray tena tsara izahay hanovana ny fiaranao mba hifanaraka amin'izany.
Ny lafiny rehetra amin'ny jiro dia karakaraina amin'ny anaranao mba ho ara-dalàna sy ho vonona hitondra.
Afaka manompo sy manamboatra ny fiaranao ve izahay?
Raha mila asa kely ny fanafarana Kanadiana vaovao anao dia aza manahy. Manana ekipa mekanika feno eto an-toerana izahay vonona hanampy amin'ny serivisy isan-karazany.
Ankoatra ny fanovana jiro dia manao fanamboarana tsy tapaka ny fiara feno sy fikojakojana ankapobeny.
Ny tombotsoan'ity fananana eo ambanin'ny tafo iray ity dia vidiny lehibe, ary serivisy rehetra misy.
Ny manam-pahaizana momba ny fiara amerikana dia mahatakatra fa hiova kely amin'ny zavatra hafa foana izy ireo ary fantatsika tsara ny ataontsika.
Miady amin'ny fiara mahazatra avy any Canada ve isika?
Nandritra ny taona maro dia nanampy mpanjifa maro avy any Canada izahay mba hanafatra karazana kilasika ary hahatakatra fa mety mitaky famerenana amin'ny laoniny izy ireo rehefa tonga any Royaume-Uni na mila fanaterana any aminao fotsiny.
Na inona na inona fanafaranao dia afaka manampy amin'ny dingana manontolo izahay.
Impiry izahay no mandefa avy any Canada?
Miankina tanteraka amin'ny habetsahan'ny mpanjifa iaraha-miasa aminay any amin'ny faritra ankapobeny izany.
Matetika izahay no miezaka manangom-bokatra miaraka mba hitsitsiana vola. Noho izany dia mety ho avy hatrany na herinandro vitsivitsy.
Misy foana ny safidy ny kaontenera solo 20ft raha maika ianao na izany aza!
Manolotra ny serivisy fampidirana tanteraka izahay
Fitantanana ny fadin-tseranana
Ny antontan-taratasy momba ny fadin-tseranana, ny haba ampidirina ary ny hetra rehetra nalamina.
Fitaterana feno antoka any amin'ny toerana misy anay.
Ilaina amin'ny fisoratana anarana amin'ny lalana any UK.
Natolotra ny toerana tokony hisy azy ny fiaranao.